Rooble oo la kulmay Deni iyo wararkii ugu dambeeyey ee shirka – Benaadir News Network
Rooble oo la kulmay Deni iyo wararkii ugu dambeeyey ee shirka
Muqdisho (Benaadir News) – Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulan soo dhaweyn iyo is xog-wareysi ah la yeeshay madaxweynaha Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Deni oo galabta Muqdisho u yimid ka qeyb galka Shirka Golaha Wadatashiga Qaran ee Dhammeystirka Arrimaha Doorashooyinka.
Faah-faahin dheeri ah lagama bixin waxa ay ka wada-hadleen, hase yeeshee wuxuu kulanka qeyb ka yahay kulamo uu Rooble la qaadanayey madaxda maamul goboleedyada ee ku sugan caasimadda.
Rooble ayaa sidoo kale xalay la kulmay madaxweynayaasha Jubaland, Galmudug iyo Koonfur Galbeed oo horey ugu sugnaa magaalada, oo la filayo inuu ka furmo shirka arrimaha doorashada ee ra’iisul wasaare Rooble uu hoggaaminayo.
Magaalada ayaa waxaa weli ka maqan Madaxweynaha HirShabeelle Cali Guudlaawe oo la filayo inuu soo gaaro berri oo Sabti ah, waxaana wararku ay sheegayaan in shirka Afrisyooni uu si rasmi ah u furmi doono maalinta Axadda ah ee 23-ka May 2021-ka.
Shirkan ayaa ah fursadii ugu danbeysay ee looga gudbayo is-mari waagga doorashada dalka oo sanad ka badan oo jiitameysay, dalkana gelisay qalalaase dastuuri iyo mid amni.
Previous Rumaan Cabdulqaadir: Xabadda ma ayadaa isku dhufatay mise waa la dilay? Ddaawo)
Next Daawo: Rumaan Cabdulqadir: Xabadda ma ayada ayaa isku dhufatay mise waa la dilay?